ပြပွဲကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်ကြောင်း7အမှုအရာ - ကလူ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် ပြပွဲကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်ကြောင်း "7 အမှုအရာ - ကလူ
ပြပွဲကိုအောကျမေ့ပါလိမ့်မည်ကြောင်း7အမှုအရာ - ကလူ
သံအိမ်ထောင်မကျခင်ကသူတို့ချစ်သူများ wooing မြောက်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယား, သားရဲ၏အမွေအနှစ်အတွက်၎င်း၏စူပါထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဆက်ပေးသည်။ အဆိုပါ9စက်တင်ဘာလရွှေတစ်ခုမှာ Center က Sacramento, အ Oakland Arena မှာထို့နောက် 10 စက်တင်ဘာလ။
ပြပွဲဒါအမှတ်ရစရာ Oakland ဖွဲ့သောအခြို့သောအချိန်လေး / ဒြပ်စင်
ဘရုစ် Dickinson ၏စကားသံကို
ဖြစ်ကောင်းဒီ list ထဲမှာပထမဦးဆုံးအရာဌာနဘို့ Ronnie ဂျိမ်း Dio နှင့်အတူချည်ထား - ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုများ၏သမိုင်းအတွက်အစွမ်းထက်အဆိုတော်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုမင်းသည်နေဆဲ "လင်းယုန်ဝံ့ဘယ်မှာ" "အေ့စ်မြင့်မား" နဲ့အတူစတင်သီချင်းများများစာရင်းကို browsing 2019, 16 သွားစောင့်ရှောက် "Midnight မှ2မိနစ်။ "
သူကမိမိအပရိတ်သတ်တွေအချို့တို့ကတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေလျှင်ပင်, သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပေးစေခြင်းငှါချီတုံချတုံမထားဘူး။ မဟုတ်တစ်ချိန်ကပေမယ့်နှစ်ကြိမ် - Oakland ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, သူဆေးလိပ်သောက်အိုးများ၏အန္တရာယ်များအကြောင်းကိုလူအစုအဝေးကိုဆုံးမ။
"" ငါဆေးခြောက်သငျ့စိတျထဲမှာကြောင်းကိုငါသိ၏ "ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ထိုကောင်းသောမဟုတ်ပါဘူး။ "
အများစုမှာကြိုးနှင့်ချည်နှောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဂစ်တာသမားရှိသည်ဖို့ကံကောင်းဖြစ်ကြသည်။ သမီးကညာကို, အတောအတွင်းသုံးအကောင့်: "အဆိုပါ Trooper" နှင့် Oakland ထဲမှာ "အေ့စ်မြင့်မား" ကဲ့သို့သောသီချင်းများအပေါ်တပ်ဖွဲ့များပူးပေါင်းသူကို Dave Murray, Adrian စမစ်နှင့် Janick Gers ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအသုံးပြုခဲ့ဗြိတိသျှတိုက်လေယာဉ် - - အခါအုပ်စုတစ်စု၏ဦးခေါင်းကိုကျော်ပျံသန်းသောကြီးမားသော Supermarine လေယာဉ်အပါအဝင်ဤမျှလောက်များစွာသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်စီးရီးအတွက်အေးမြသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် "အေ့စ် High" ဆိုတဲ့ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ဂိမ်း။  အဆိုပါကုန်သွယ်
အဖြစ်ဟော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုကိုဝယ်, သံအိမ်ထောင်မကျခင်ထက်ပိုမိုထိုက်တန်အဘယ်သူမျှမပြောပြပါ။ အဆိုပါအုပ်စုသည် Oakland ကုန်သွယ်မှာတဲ 10 45 ကွဲပြားခြားနားသောရှပ်အင်္ကျီ ($ 75 ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကျီရှပ်အင်္ကျီကျော်) $ ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုလူအပေါင်းတို့ကြလိုအပျသောသူတို့အားပရိသတ်တွေအတော်များများဖြစ်ကောင်းရှိခဲ့သည်။
အားလုံးအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးသတ္တုသီချင်း၏ခေါင်းစဉ်အများအပြားပြိုင်ဘက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်မျှမကျန်စီးရီးပိတ်လိုက်သောဤဓမ္မသီချင်းထက် သာ. ကောင်း၏။
ဒါဟာအဓိကအားဖြင့်ဤရာစုတှငျနှစ်ခုသာရွေးချယ်အတူဟောင်းပန်ကာအကြိုက်ဆုံးမှမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ဤတွင်ကိုငါ့မှတ်စုနှင့်သတင်းအချက်အလက် setlist.fm အပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကစားသောအရာကိုင်:
3 "Midnight မှ2မိနစ်"
4 "ဒီ clansman"
5 "ဟု The Soldier"
"ဘုရားသခငျ၏ သာ. ကြီးမြတ်ကောင်းသောသည်" 7,
8 "ဟု The Wicker က Man"
10 "Icarus ၏ပျံသန်းမှု"
 တဖန် 19659003, "သံအိမ်ထောင်မကျခင်":
16 "ဟုအဆိုပါတောင်ကုန်းမှ Run"
ပြည်သူ့: Laeticia Hallyday များအတွက်စိတ်ပျက်စရာ: က၎င်း၏ဆန့်ကျင်နေသော်လည်း, ပရိသတ်တွေ Jean-Baptiste Guegan ကိုထောကျပံ့, အသံအယောင်ဆောင်ဂျော်နီ